मिडिया > जर्नल उत्तराधिकार > पत्रिका उत्तराधिकारी 2015-04 > खनन राजा सुलेमान (भाग 16)
मैले हालसालै मेरा अभिभावकको घर र स्कूलको भ्रमण गरें। सम्झनाहरु फिर्ता आए र म फेरि राम्रो पुरानो दिन को लागी उत्सुक थिए। तर ती दिनहरू सकिसक्यो। बालवाडी सुरु भयो र फेरि बन्द भयो। स्कूलबाट स्नातक हुनु भनेको अलविदा हुनु र नयाँ जीवनका अनुभवहरूको स्वागत गर्नु हो। यी मध्ये केही अनुभवहरू रमाईलो थिए, अरूहरू पीडादायी र डराउने। तर चाहे राम्रो होस् या नराम्रो, छोटो वा लामो, मैले एउटा कुरा सिकेको छु: पथमा रहन, किनकि यससँग आउने परिवर्तनहरू हाम्रो जीवनको एक प्राकृतिक हिस्सा हुन्।
यात्राको अवधारणा पनि बाइबलको केन्द्रबिन्दु हो। बाइबलले जीवनलाई विभिन्न समय र जीवनका अनुभवहरू भएको बाटोको रूपमा वर्णन गर्दछ जसको सुरुवात र अन्त्य हुन्छ। बाइबलले यहाँ हिँड्ने कुरा बताउँछ। नूह र हनोक परमेश्वरसँग हिँडे (उत्पत्ति ५:२२-२४; ६:९)। जब अब्राहाम ९९ वर्षका थिए, परमेश्वरले उनलाई उहाँको अगाडि हिँड्न भन्नुभयो (उत्पत्ति १७:१)। धेरै वर्ष पछि, इस्राएलीहरू मिश्रको दासत्वबाट प्रतिज्ञा गरिएको भूमिमा आफ्नो बाटोमा हिंडे।
नयाँ नियममा, पावलले ख्रीष्टियनहरूलाई बोलाइएको आह्वानमा योग्यतासाथ बाँच्न आग्रह गर्छन् (एफिसी ४:१)। येशूले भन्नुभयो कि उहाँ आफै बाटो हुनुहुन्छ र हामीलाई उहाँलाई पछ्याउन निम्तो दिनुहुन्छ। प्रारम्भिक विश्वासीहरूले आफूलाई नयाँ मार्गका अनुयायीहरू भने (प्रेरित ९:२)। यो चाखलाग्दो छ कि बाइबलमा वर्णन गरिएका धेरैजसो यात्राहरू परमेश्वरसँग हिंड्नेसँग सम्बन्धित छन्। त्यसैले: भगवानको साथमा हिंड्नुहोस् र आफ्नो जीवनमा उहाँसँगै हिंड्नुहोस्।
बाइबलले हिँडिरहनुलाई ठूलो महत्त्व दिन्छ। त्यसकारण यो विषयलाई समर्पित एउटा प्रख्यात भनाइले हामीलाई अचम्म मान्नुपर्दैन: "आफ्नो सारा हृदयले प्रभुमा भरोसा राख्नुहोस्, र आफ्नो समझमा भर नपर्नुहोस्, तर उहाँलाई आफ्ना सबै मार्गहरूमा सम्झनुहोस्, र उहाँले तपाईंलाई सही मार्गनिर्देशन गर्नुहुनेछ। .» (हितोपदेश ३,५-६)
पद5मा सुलेमान लेख्छन्, "तेरो सारा हृदयले प्रभुमा भरोसा राख्, र तेरो समझमा भरोसा नगर्" र "तेरो सबै मार्गमा" उनलाई याद गर। यहाँ मार्ग भनेको यात्रा गर्नु हो। हामी सबैसँग हाम्रो व्यक्तिगत यात्रा छ, जीवनको माध्यमबाट यस महान यात्रामा यात्राहरू। ट्रिपहरू जुन अन्य व्यक्तिको यात्राहरूसँग मिल्दछ। यात्रामा सम्बन्ध परिवर्तन र बिमारी र स्वास्थ्यको अवधिहरू सामिल छन्। यात्रा सुरु हुन्छ र यात्रा समाप्त हुन्छ।
बाइबलमा हामी मोशा, जोसेफ र डेभिड जस्ता व्यक्तिहरूको धेरै व्यक्तिगत यात्राको बारेमा सिक्छौं। प्रेरित पावल दमीशकको यात्रा गरिरहेका थिए जब उनको पुनरुत्थान हुनुभएको येशूको साथ थियो। केही क्षणमा, उसको जीवनको दिशा नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको छ - एक भन्दा बढी तरीकामा। केहि यात्राहरू त्यस्तै हुन्छन्। हामी यो योजना गर्दैनौं। हिजो कुरा एक दिशामा गयो र आज सबै कुरा परिवर्तन भएको छ।तिमी र घृणा र इसाई धर्मलाई ध्वस्त पार्ने ईच्छाले भरिएको इसाई विश्वासको उत्कट विरोधीको रूपमा पावलको यात्रा सुरु भयो। उनले आफ्नो यात्रा केवल एक इसाईको रूपमा मात्र समाप्त गरेनन्, तर उनले एक व्यक्तिको रूपमा जसले सारा संसारभरि धेरै फरक र चुनौतीपूर्ण यात्राहरूमा फैलाए। तपाईको यात्राको बारेमा के छ? तिमि कहाँ जादै छौ?
हृदय र टाउको होइन
छैठौं पदमा हामी यसको जवाफ पाउँछौं: "याद राख्नुहोस्।" हिब्रू शब्द जाडाको अर्थ बुझ्नु वा जान्नु हो। यो एकदम महत्त्वको शब्द हो र अवलोकन, प्रतिबिम्ब र अनुभव मार्फत कसैलाई चिन्नु समावेश छ। यसको विपरित तेस्रो व्यक्तिको माध्यमबाट कसैलाई चिन्न सकिन्छ। यो विद्यार्थीले आफूले अध्ययन गरिरहेको सामग्रीसँगको सम्बन्ध र पति र पत्नीबीचको सम्बन्ध बिचको भिन्नता हो। परमेश्वरबारे यो ज्ञान मुख्यतया हाम्रो टाउकोमा फेला पर्दैन, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो हृदयमा।
त्यसैले सोलोमन भन्छन् कि यदि तपाईं उहाँसँग आफ्नो जीवन मार्गमा जानुभयो भने तपाईंले भगवान (जादा) लाई चिन्नुहुनेछ। यो लक्ष्य सधैं समयमा हुन्छ र यो यस यात्रामा येशूलाई चिन्ने र सबै तरिकामा परमेश्वरको सम्झना गर्ने बारे हो। सबै नियोजित र अनियोजित यात्राहरूमा, तपाईंले गलत दिशा लिनुभएको कारण समाप्त हुने यात्राहरूमा। येशू सामान्य जीवन को दैनिक यात्रा मा तपाइँ संग र तपाइँ एक साथी बन्न चाहानुहुन्छ।
हामीले परमेश्वरबाट यस्तो ज्ञान कसरी प्राप्त गर्ने? किन येशुबाट सिक्ने र दिनभरका विचार र चीजहरूबाट टाढा शान्त ठाउँ खोज्ने, जहाँ तपाईं दिनहुँ परमेश्वरको अगाडि समय बिताउनु हुन्छ, र किन आधा घण्टाको लागि टेलिभिजन वा सेल फोन बन्द नगर्ने? भगवान संग एक्लै हुन को लागी समय लिनुहोस्, उहाँको कुरा सुन्नुहोस्, उहाँमा आराम गर्नुहोस्, प्रतिबिम्बित गर्नुहोस् र उहाँलाई प्रार्थना गर्नुहोस् (भजन ३::))। म तपाईंलाई Eph 37,7:3,19 लाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको प्रार्थना बनाउन प्रोत्साहन दिन चाहन्छु। पावलले यसका लागि प्रार्थना गर्छन्: "परमेश्वरको प्रेम जान्नको लागि जुन सबै ज्ञानलाई पार गर्दछ, ताकि हामी परमेश्वरको सम्पूर्ण पूर्णताले भरिपूर्ण हुन सकौं।
“सुलेमान भन्छन्, भगवानले हामीलाई डो .्याउनुहुनेछ। जे होस्, यसको मतलब यो होइन कि हामी परमेश्वरसँग हिंड्ने बाटो सजिलो हुनेछ कष्ट, पीडा र अनिश्चितता बिना। गाह्रो समयमा पनि, भगवान पोषण, प्रोत्साहन र उहाँ आफ्नो उपस्थिति र शक्ति को माध्यम बाट आशीर्वाद दिनुहुन्छ।
भर्खर मेरो नातीले मलाई पहिलो पटक हजुरबुबा भनेर बोलाए। मैले ठट्टामा मेरो छोरालाई भने, "यो गएको महिना मात्र हो जब म किशोरावस्थामा थिए। गत हप्ता म बुबा थिएँ र अब म हजुरबा हजुर हुँ - समय कहाँ गयो? » जीवन उडेर। तर जीवनको हरेक अंश एक यात्रा हो, र अहिले तपाईंको जीवनमा के हुँदैछ, यो तपाईंको यात्रा हो। यस यात्रामा परमेश्वरलाई चिन्नु तपाईंको लक्ष्य हो।